देशको Rossia dossia विलम्बनबर्गनबर्ग रेस्टाक्ट पीटरबर्गमा। टोथोटेल होटल रेटिंग र होटेलहरू।
TOPE-SUBIOUSALE होटल र रसियाको अतिथि घर - यात्रा रूसी समाचार
होटल थ्रीस्टवेकस्की क्यासल (युनो, मारी एल)
BIVUAK-बिभौक Luptrus (TERSKOL, Kabardino-Balks-Balks रिपब्लिक)
पर्यटक जटिल "अबआलाक" (Abalak, ट्यूटान क्षेत्र)
"महान स्थान: minutes मिनेट मध्य स्ट्रिट र kmerlin to मा5मिनेटमा minutes मिनेट। आरामदायक र विशाल कोठा। झरनाको साथ आरामदायक चोक। राम्रा नाफा सूचकहरू (बुफे होइन, तर हामी पर्याप्त थियौं)। रेस्टुरेन्ट "तुगेनेभ" उही भवनमा अवस्थित "तुगेनेव" मा 10% छुट दिनुहोस्। »
"उत्कृष्ट रेजी व्यापार ट्रिपहरूको लागि। त्यहाँ सबै कुरा आवश्यक छ, महामारी योग्य स्टाफ, उत्कृष्ट बिहानको खाजा, धेरै राम्रो रेस्टुरेन्ट, परिष्कृत भाँडो, हाम्रो आफ्नै उत्पादनको निम्बू, पकाएको छ! त्यहाँ कोठा सेवा र जिम पनि छ। हामी दोस्रो पटक पहिले नै सेवा गर्छौं र अधिक रोकिनेछौं। "
<< p> नयाँ संवेदनाहरूको खोजीमा पर्यटकहरू प्राय: केही गैर मानक स्थानमा बसोबास गर्न चाहन्छन् ... उदाहरणका लागि, रचनात्मकता र उज्यालो भावनाहरूमा। त्रिनिनले रसियाको शीर्ष 10 अत्यन्त असामान्य होटलहरू र अतिथि घर प्रदान गर्दछ, टभिल आवासको अनलाइन बुकिंग स्रोतले तयार गरेको। U. यो लुकेका स्थानहरूमा छ जुन पहिचानलाई प्रेम गर्दछ र विशिष्ट हुन्छ।
<< p> होटेल अवस्थित छ: गाउँले मनोरन्जन केन्द्रको राजमार्गमा राजमार्ग, र्याघुरोड, रसिया। होटेल "ताइजानया स्लोबोडा" र्व्नरोडमा अवस्थित छ। ओडन्तीभोउ 37 37 किमी टाढा छ, र किद्ष्ठोजर्क k1 किलोमिटर टाढा छ। Vnukovo अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट 49 km किलोमिटर टाढा छ।
उपकरणहरू प्लेट: कोठाहरूमा एक कुटिएको क्षेत्र छ। कोठाको संख्यामा तपाईं एक फ्रिजको साथ भान्छाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। स्टोभको निपटानमा।
<< p> पाहुनाहरूको लागि सेवाहरू: पाहुनाहरूले बगैंचाको आनन्द लिन सक्छन्, टेरेस,224-घण्टा फ्रन्ट डेस्क र रेस्टुरेन्ट। सबै कोठाहरूको आँगन छ। एक महाद्वीपीय बिहानको खाजा दैनिक सेवा छ।
स्थान: गाउँ क्रीरी, ट्यासाभो, रसिया। Eco-होटल लेपोटा एक मौसमी आउटडोर पोखरी को साथ मा डेमर्टरवाबाट2km किलोमिटर को गाउँ मा स्थित छ। Hereigtyeevovo अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट 622 किलोमिटर टाढा छ।
कोठा सुविधाहरू, सुविधाहरू, एक कुटिल क्षेत्र, वार्डरोब, एक वार्ड-स्क्रिन टिभी र एक निजी बाथरूम र एक निजी बाथरूम र एक निजी बाथरूम। कोठाले जंगल र नदीलाई बेवास्ता गर्दछ।
पाहुना सेवाहरू: त्यहाँ एक टेरेस र साझा लाउन्ज छ। त्यहाँ भएको इलाकामा एक बार छ। बफे खाजाको इको-होटल लेपीटाको पाहुनाहरूको लागि प्रस्तुत गरिएको छ। होटल रेस्टुरेन्टले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र युरोपियन र युरोपियन भाँडा माझ्दो पार्छ। क्षेत्रको बच्चाको खेल मैदान छ। इको होटल लेपोटाले साइकल र स्की उपकरण भाडामा लिनेछ। वरपर स्कीइंग र पैदल यात्राको लागि उत्कृष्ट छन्। यसले224 घण्टा फ्रन्ट डेस्क सुविधा गर्दछ।
मलाई सबै मनपर्यो! अद्भुत स्टाफ, स्पष्ट रूपमा स्वादिष्ट खाना, राम्रो स्थान र क्षेत्र। मैले जन्मदिनको लागि एक जना जवान व्यक्तिको लागि चकित भएँ र व्यक्तिगत रूपमा कुनै छुट र उपहारहरू सोधेन, र कोठाका कर्मचारीहरूले वार्षिकको बोतल र फाटेंट प्लेटहरू ल्याए। म फिर्ता आउन खुशी हुनेछु, जब यो तातो हुन्छ! धन्यबाद!
आरामदायी कोठाहरू, सबै काठले बनेको छ, राम्रो स्पा। सुन्दर क्षेत्र र व्यापारको सामान्य दृष्टिकोण प्रत्येक विवरणमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। सामान्यतया, एक राम्रो ठाउँ।
स्थान: फेरी सडक, 22, SVISTOR, रसिया। होटेललाई "हार्सार्साकाका मनर" को येआर रिसावोररको सिभिस्टुकी गाउँमा अवस्थित छ। श्रीप्रद बस स्टेशन होटेलबाट 1 किलोमिटर छ, जहाँबाट खुमकीमा जानको लागि यो अनगिन्ती छ। HerereTtyevo अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट 44 44 किल होटेलहरू।
कोठा सुविधाहरू: सबै कोठाहरू वातानुकूलन, टेलिभिजन र फ्रिजरहरूसँग सुसज्जित छन्। डुप्लेक्स कोठा पनि एक आटिरहेको क्षेत्र छ। एक ह्यान्डरिडीको साथ निजी बाथरूम नि: शुल्क शौचालयको साथ सुसज्जित छन्।
अतिथि सेवाहरू: एक इनडोर पोखरी, फिटनेस केन्द्र, एक सुदूरपन र सौना। नि: शुल्क पार्किंग साइट मा सुसज्जित छ। पाहुनाहरूले होटेलको आफ्नै रेस्टुरेन्टमा खाना खान सक्दछन्, वा खाना र पेय पदार्थको वितरणको लागि अर्डर गर्नुहोस्। होटल इस्त्री सुविधाहरू र लुगा धुने सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
अंग्रेजीमा, यस्तो छुट्टीको लागि छुटकारा भनिन्छ - "faiahide" दैनिक जीवनबाट। कहिलेकाँही केहि विशेष स्थानमा जान आवश्यक छैन: तपाईं केवल एक आरामदायी सुन्दर होटल छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ एक साताको अन्त्यमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा धेरै। हामीले रसियाका सब भन्दा चाखलाग्दो होजहरू खोज्ने निर्णय गर्यौं, जुन भ्रमणको भ्रमणले णात्मक पर्यटक आकर्षणहरू लिन सक्छ।
पाँच स्टार होटल 1 18300 को हवेलीमा 1 18300 को हवेलीमा अवस्थित छ। यसको भित्री आंशिक रूपमा जाडो प्यालेस र नयाँ मामिटेशेड प्रतिलिपि गर्दछ, र कोठाको फर्निचर फ्लोरेन्टिन काठ मास्टरको पुरानो स्केच अनुसार गरिन्छ। छोटकरीमा, यो विलासी विकल्प सांस्कृतिक पूँजीमा बस्न आदर्श छ र पूर्ण रूपहरू अघि उनी सबै भ्रमणहरू अघि आफ्नै वातावरणमा झगडा गर्नुहोस्।
Prabe प्रत्येक रात:2ruls 0000 रूबलहरू प्रति दोहोरो कोठाबाट। गर्मी मा तपाईं होटेल को क्षेत्र मा होटेल को क्षेत्र मा रर्डर को क्षेत्र मा बस्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत डेटाको प्रशोधन गर्न सहमत म मिडिया ट्राभल सम्पन्न द्वारा प्रदान गरिएको सेवाहरू प्राप्त गर्न मलाई द्वारा दिइएको छ।
<< p> म सबै निर्दिष्ट व्यक्तिगत डेटाको साथ व्यायाम गर्न मेरो सहमति व्यक्त गर्दछु: स collection ्ग्रह, स action ्कलन, भण्डारण, परिष्कृत), डिमिलिंग, अवरोध, ड्रमिंग, ब्लाइडिंग, विनाश, विनाश, विनाश। साथै लागू कानून बमोजिम निजी डेटा द्वारा कुनै पनि अन्य कार्यको कार्यान्वयनको रूपमा। प्रशोधन गर्नु स्वत: प्रयोगको प्रयोग गर्न सकिन्छ र रिकसिभ प्रयोग बिना (स्वचालित प्रशोधनको साथ)।
<< p> व्यक्तिगत डेटा प्रशोधन गर्दा, कम्पनी "मिडिया यात्रा सम्पन्न" LLC उनीहरूको प्रसंस्करणको विधिहरू लागू गर्न असीमित छ।